Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » एमालेले घेराबन्दी तोड्न सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छ
एमालेले घेराबन्दी तोड्न सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छ
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य विष्णु रिमाल अहिले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीका सचिव छन् । एमालेले आयोजना गर्ने अधिकांश ठूला कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा रिमालको भूमिका हुने गरेको छ । रिमालसँग मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको तयारी र पार्टीको नयाँ नेतृत्वको विषयमा ईकान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको कुराकानी ।
मूल व्यवस्थापनअन्तर्गत विभिन्न १२ वटा समिति छन् त्यसले आ-आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छन् । चेक लिस्ट नै बनाएर काम भइरहेको छ । अहिले धेरै सक्रिय भनेको प्रतिनिधि व्यवस्थापन कमिटी हो । त्यसको अधिकांश काम मंगलबार बेलुकीसम्म प्रतिनिधि छानेसँगै सकिन्छ । त्यसपछि कार्ड बनाउने र बन्दोबस्तीको विषय आउँछ ।
त्यसका लागि मञ्च व्यवस्थापन र स्वयंसेवक परिचालन गर्ने दुइटा कमिटीको टोली बुधबारसम्म चितवन मुभ भइसक्छन् । बुधबारबाट मंच व्यवस्थापनको काम सुरु हुन्छ । उद्घाटन र बन्द सत्रको आवश्यक तयारीको काम सँगसँगै थाल्छौं । बन्द सत्रका लागि पालको नयाँ हल नयाँ बनाउनु पर्नेछ । अन्य हल पनि बनाउनुपर्छ । इ-भोटिङमा जाने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै हल दिनुपर्ने हुन्छ ।
चुनावमा कुनै प्रकारको विवाद नआओस् भन्ने विशेष ध्यानमा राखिने छ । अन्यभन्दा निर्वाचनको विषयमा स-सानो कुरामा ध्यान दिनेछौं । कसैले निर्वाचनमा भएको कमिकमजोरीको कारण हारेँ भन्ने भयो भने पार्टीका नेताहरुबीचमा मै मनोमालिन्य बढ्छ ।
अर्को भनेको १० गते जनपरिचालन व्यवस्थापनको विषय हो । त्यसका लागि सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा परिचालन कमिटी बनाएका छौं । पालिका र वडा तहको अधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएकोले केही सजिलो हुने देखिन्छ । नयाँ नेतृत्व आएको छ । नेकपाकालमा मुर्छित कमिटीहरु बौरिएका छन् । जागेका वडा र पालिका कमिटीहरुमा आ-आफ्नो ढंगले योजनाहरु बनेका छन् । आगामी साता समीक्षात्मक बैठक गर्नेछौं ।
३-४ वटा महाधिवेशनको खर्चको समीक्षा गरेका छौं । ८ ‍औं महाधिवेशन सवा २ करोड, काठमाडौं बाहिरको जनपरिचालन नगरिकन गरिएको नवौं महाधिवशेनमा सवा ४ करोड र कार्यकर्ता मात्रै परिचालन गरिएको विधान महाधिवेशनमा ५ करोड रुपैया खर्च भएको छ । यो सबैको अनुपात हेर्दा अहिले साढे ७ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका छौं । त्यसमा पनि परिचालन, खाना, आवाससहितको विषयमा कतिकति खर्च लाग्ने भन्ने बजेट तयार पारेका छौं । यो खर्च प्रत्येक सदस्यबाट उठाएर परिचालन गर्छौ । पार्टीका सबै सदस्यसँग १ सय रुपैया सहयोग मागेका छौं । संकलन उत्साहप्रद छ । फेसबुकमा राखेको पहिलो २ घण्टामै १ लाख रुपैया संकलन भएको थियो । त्यसलाई १ सयले भाग गर्ने हो भने एमालेका कति कार्यकर्ता एकपटक सहभागी भए भनेर भन्न सकिन्छ । संकलन र वितरणको काम संगसँगै गरिरहेका छौं । अहिले साढे ७ करोड खर्च हुन्छ र साथीहरुलाई स्रोतको पनि परिचालन गर्न भनेका छौं । उत्साह भएको कारणले गर्दा त्यति ठुलो समस्या हुने देखेका छैनौं । महाधिवेशनका लागि चन्दा उठाउनका लागि केही पनि छापिरहेका छैनौं ।
त्यसमा शेयरिङ हुन्छ । केन्द्रबाट सिमित मात्रै खर्च हुन्छ । स्थानीय तहमा केही परिचालित हुन्छ । केन्द्र र स्थानीय कमिटीहरुले गर्ने खर्चको अनुपात कस्तो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्ने सक्ने अवस्था छैन । मैले भन्दा केन्द्रले गर्ने खर्च भन्ने हो । कतिपय नदेखिने खर्च धेरै हुन्छन् । विधान महाधिवेशनमा ५ करोड प्लस खर्च थियो तर त्यसमा आवासमा भएको खर्च थिएन । सबै साथीहरु आ-आफ्नै तरिकाले बस्नुभयो त्यो खर्च हिसाब गर्ने हो भने खर्च रकम बढीहाल्छ ।
नवौं महाधिवेशनमा पनि मेसिनको प्रयोग गर्न खोजेका थियौं । तर प्रयोग हुन सकेन । प्राविधिक समस्या भएको कारणले नभएको होइन । त्यो पर्फेक्ट थियो । जसले हामीलाई उपलब्ध गराउने भनेका थिए उनीहरुले ९२-९३ चुनाव गराई सकेका छन् र कहिँ पनि गुनासो आएको छैन । ५ हजारभन्दा बढी मतदाता हुने राप्रपाको दुई वटा महाधिवेशन उनीहरुले गराइसकेका छन् । नवौं महाधिवेशन भन्दा यता त्यो मेसिन अझै सोफेस्टिकेटेड बनेको छ। इभोटिङ अनलाइन हुन्थ्यो भने त्यसमा ह्याकिङ हुने भन्ने डर हुन्थ्यो । प्रत्येक मेसिन आइसोलेटेड हुन्छन् । स्थायी समितिमा त्यसलाई डेमो नै गर्यौं् । त्यसले प्राविधिक समस्या केही देखिएको छैन । नवौं महाधिवेशनमा गुटबन्दी थियो त्यसैको कारणले गर्दा प्रयोग गर्न समस्या भएको थियो । अहिले त्यो समस्याबाट पनि मुक्त छौं । अहिले सबै नेताहरु प्राविधिक रुपमा यो कति संभव छ, यो गर्दा हामीलाई लाभ छ कि छैन ? त्यो हिसाबमा हुनुहुन्छ र निपूर्ण रुपमा परिणाम दिन सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्रै चिन्ता रहेको छ । त्यसलाई जाँच गरेर पनि हेर्नुभयो त्यसपछि सबै नेताहरु सहमत हुनुहुन्छ ।
त्यसमा समानान्तर रुपमा चिपको प्रयोग पनि हुन्छ र मतदान गरेको प्रिन्ट कागज पनि आउँछ । कागजैबाट पनि भोट गन्न सकिन्छ । त्यसले प्रिन्ट पनि निकाल्छ । अमेरिकामा प्रयोग हुने तहको भेटिङ मेसिन होइन तर यसले राम्रोसँग काम गर्छ । भारतमा जस्तै सबै मेसिन फरक फरक हुन्छन् गणनाको समयमा नेटवर्किङ गरेपछि जोडिन्छ त्यही तरिकाको प्रयोग गर्दैछौं । यसमा प्राविधिक रुपमा कुनै समस्या छैन । नेताहरुले उठाएको कुरा भनेको मतदान गर्न एक दिन लाग्छ के मजा भयो भन्ने छ ? त्यस्तो हो भने काउन्टलाई कति दिन लाग्छ ? नवौं महाधिवेशनमा गणनाका लागि १० दिन जति लागेको थियो । गणना गर्न १० दिनमा लाग्ने खर्चले एक दिन मतदान गरेर परिणाम निकाल्दा त्यही फाइदा हुन्छ भन्ने भयो । मतदानका लागि १ सय वटा मेसिनको प्रयोग हुन्छ ।
२० वा २५ मिनेट लाग्छ होला । त्यसैले मतदानका लागि १ सय मेसिन राखेको हो । त्यसले गर्दा बिहान ८ बजेबाट मतदान गर्न सुरु गर्यौ१ भने बेलुकी ५-६ बजेसम्ममा मतदान सकिन्छ । मतदान सकिएको २ घण्टाभित्रमा परिणाम आउँछ ।
एमालेमा किचकिच हुँदा अरुलाई रमाइलो लाग्ने हो । अन्य दलमा त्यो कुरा उठ्दैन । कांग्रेसका कहिले वैचारिक बहस हुन्छ ? कांग्रेसमा ७८ वर्षको युवाले चुनाव लड्दा बुढो उठ्यो भनेर कसले भन्या छ र ? शेरबहादुर दाई सधैभर चुनाव लड्दा यो मानिस किन सधैंभर दोहोर्योछ भनेर कसले भन्छ र ?
३० वर्षदेखि प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर किन दोहोर्याएको कसले भन्छ र ? एकीकृत समाजवादीको माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष हुँदा कसले प्रश्न गर्छ र ? यो प्रश्न सबै उठ्ने एमालेलाई हो । एमालेभित्र पनि विशेषगरी केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित हुने हो । यो मनोविज्ञानलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । विचारको सन्दर्भमा जति बहस गर्नुपर्ने हो त्यो भइसकेको छ ।
रौनक त गोदावरीमा छँदै थियो नि ! सञ्चार माध्यमहरुले हाम्रो कार्यक्रमलाई ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल्स’सँग तुलना गरेर समाचार आएकै हो । त्यसैले रौनक आ- आफ्नो समयको हुन्छ । एमाले सकियो भनेको समयमा जुरुक्क उठेको देखियो नि ! त्यो नै रौनक हो ।
नेतृत्वको छनौट कसरी हुन्छ ? प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ कि सर्वसम्मत रुपमा हुन्छ ?
अहिले एमाले विचार, नेतृत्व र व्यवहारमा पनि एकतावद्ध भएर अघि जान चाहान्छ । एमालेले आफू चौतर्फी घेरामा रहेको र तलमाथि गरे भने यो घेराबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन भन्ने महसुस गरेको छ । त्यो भन्दा बढी होला जस्तो लाग्दैन । सञ्चार माध्यमहरुमा एमालेमा पदाधिकारी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भनेर पढिरहेको छु । अन्य साथीहरुको जिज्ञासा भएर नै पत्रकारले समाचार लेख्नु भएको होला । एमालेभित्र यो विषयमा ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । शंकर पोखरेल आठौं महाधिवेशन पहिलो सचिव हुनुहुन्थ्यो उप-महासचिवमा हार्नुभयो तर पनि उहाँको भूमिका घटेन मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । अहिले पनि केन्द्रीय भूमिकामै हुनुहुन्छ । अरुको पनि त्यही नै हो ।
‘एमालेले धेरै हन्डर खायो, घेराबन्दी तोड्न सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छ’
ईकान्तिपुर, मंसिर १, २०७८ फोटो र भिडियो: अंगद ढकाल